China China tebụl oge a na-amụ akwụkwọ na ebe a na-ere akwụkwọ maka ụmụaka Manufacturer and Supplier | Yifan
Oge a na-amụ ihe ọmụmụ ebe a na-ede akwụkwọ maka ụmụaka
Tebụl a dị mfe nke nwere ọtụtụ nchekwa, drawer 1, kọlọtọ 1, 1 na-emeghe cubed bookshelf.
EXW Ahịa: US $ 0.5 - 9,999 / Ibe (kwuo okwu na ọrụ ndị ahịa)
Min.Order ibu: 30 iberibe
Atụmatụ 1 Igbe, 1 igbe na ọnụ ụzọ
YLỌ dịkọrọ ndụ
IHE: melamine osisi
Isiokwu oge 120/140 / 160x60x75cm
Ewubere ya na nchekwa n'uche, o na enye gi ohere idobe usoro na nhazi n'ulo oru gi. Igosipụta desktọọpụ miri emi, 50 / 60cm, kabinet miri emi na-eme ụlọ zuru oke maka akwụkwọ ndị a. ma mepee mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, nke na-enye gị ebe zuru oke iji gbadata ịmụ akwụkwọ, ide ihe, ma ọ bụ ọrụ azụmahịa.
Ihe omuma a bu MDF na ogwe osisi, uzo E1, rube isi na nchedo gburugburu ebe obibi. Na melamine laminated elu, featuring ọkụ na-eguzogide na mgbochi ọkọ, ọ bụ nnọọ wearable.
Enwere nha 3 dị, nke pere mpe bụ 100x50x75cm, akwụkwọ mpempe akwụkwọ bụ 80x24x60cm, nke ọkara bụ 120x60x75cm, nke akwụkwọ mpempe akwụkwọ 100x24x60cm, nke buru ibu bụ 120x60x75cm, bookshelf bụ 120x24x60cm, ogologo n'ogo bụ 135cm na cube shelf.
Enwere ugba 2 dị iche iche, otu nwere cubes 5, otu bụ cubes 7, ebe ị nwere ike itinye faịlụ, ọrụ akwụkwọ, maka akwụkwọ nkeonwe, enwere ụlọ ọrụ miri emi iji debe ha. Otu ọzọ, shelf ahụ nwere ike idozi, na ntụgharị ihu, ma ọ bụ daa, n'ihi ya ị nwere ike ịtọ ya ka o kwekọọ na mkpa gị.
Agba agba bụ osisi oak na ukpa, yana drawer 1 na ọnụ ụzọ 1 na agba ọcha.
anyị na-eji ngwaike dị elu, ndị na-agba ọsọ igwe dị larịị, mgbatị dị nro.
Ejiri ụmụaka, nchekwa, na wearable ngwaahịa anyị bụ nke ewubere iji wuo iji ya na-eme kwa ụbọchị.
O doro anya na ọ bụ nnukwu mgbakwunye na ime ụlọ ihi ụra ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị.
Ihe osisi: mbadamba osisi
1drawer, 1 ụzọ, 1 bookshelf
shelf shelf. Na cubes 5/7
Nzukọ nke onwe - mmadụ 2 tụrụ aro
Maunfacturer's 3 afọ nkwa
Nha H135, W100 / 120, D50 / 60cm
Oke ibu ikike nke tebụl 15kg
Nke gara aga: Tebụl kọmputa nke oge a maka ọfịs ụlọ
Osote: Desktọpụ kọmputa dị mfe na kọmpat kọmpụta maka ọfịs ụlọ
Ogwe Kọmputa Silver
White na Gold Computer oche
White Computer Isiokwu
Comtemporary nkecha home office computer desk ...
7 ndị na-ese ihe na-ede desktọpụ kọmputa maka ụlọ ọrụ ụlọ ...
Kọmputa oche YF-CD003
Modern kọmpat kọmputa oche maka ụlọ ọrụ wi ...
Kọmputa desktọọpụ kọmputa nke oge a na nke dị mfe ...
Kọmputa oche YF-GD-001